Vaovao - fanaraha-maso CPC ao amin'ny orinasa misy anay
Ny sehatry ny fampiharana indrindra ny coke vita amin'ny kardinaly ao Shina dia ny indostrian'ny alim-bolisy electrolytic, mitontaly 65% ​​ny totalin'ny coke vita amin'ny kaline, arahin'ny karbaona, silikona indostrialy ary indostrian'ny fanorana hafa. Ny fampiasana coke misy alikaola dia solika dia amin'ny simenitra, famokarana herinaratra, vera ary indostria hafa, izay mitaky ampahany kely.
Amin'izao fotoana izao, ny famatsiana ao an-trano sy ny tinady ny coke misy mari-pahaizana dia mitovy ihany amin'ny ankapobeny. Na izany aza, noho ny fanondranana coke petrole farany solifara be dia be dia tsy ampy ny fatran'ny coke vita amin'ny kolazy, ary mbola mila manafatra coke vita amin'ny solifara antonony sy avo ho famenony.
Miaraka amin'ny fananganana singa fanaovana «coking» marobe tato anatin'ny taona vitsivitsy, hitombo ny fatran'ny coke vita amin'ny sela any China.
Miankina amin'ny atin'ny solifara, azo zaraina ho coke solifara avo (atin'ny solifara mihoatra ny 3%) sy ny koba solifara ambany (atin'ny solifara ambanin'ny 3%).
Ny koba solifara ambany dia azo ampiasaina ho paty anodika sy anoda efa voaomana mialoha ho an'ny zavamaniry aluminium sy electrode grafita ho an'ny orinasa vy.
Ny coke solifara ambany kalitao (atin'ny solifara latsaky ny 0,5%) dia azo ampiasaina hamokarana elektrônaly grafita sy mpandraharaha karbonika.
Coke solifara ambany manana kalitao ankapobeny (atiny solifara latsaky ny 1,5%) dia matetika ampiasaina amin'ny famokarana anoda efa nomanina.
Ny coke solika ambany kalitao no tena ampiasaina amin'ny famokarana silika indostrialy sy famokarana pika anodika.
Ny coke be solifara dia matetika ampiasaina ho solika amin'ny zavamaniry simenitra sy ny toby famokarana herinaratra.
Ny santionany sy fanandramana mitohy sy marina dia ampahany lehibe amin'ny fizotry ny famokarana anay.
Ny koba solifara avo dia mety hiteraka fivontosan'ny gazy mandritra ny grafitization, ka miteraka triatra amin'ny vokatra karbonina.
Ny votoatin'ny lavenona avo dia hanakana ny fitaratry ny firafitra ary hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny vokatra karbonina
Ny dingana rehetra dia hosedraina tsara, tianay hatao dia ny data momba ny fikarohana.
Ao anatin'ny rafitray manana kalitao, ny fonosana rehetra dia ho lanja in-3 farafahakeliny, hisorohana ny tsy fitoviana.
Raha tsy misy ny fanoherana ny kokoka maitso maitso dia avo dia avo, akaikin'ny insulator, aorian'ny fikajiana, nianjera mafy ny fanoherana, dia mifanohitra amin'ny fanoherana ny kôkô petrolika sy ny mari-pana miorina amin'ny mari-pana, taorian'ny 1300 oke ny fanoherana ny kokokena vita amin'ny petrole dia nihena hatramin'ny 500 μm Ω m. na izany.